MMTrendy – နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ဗဟုသုတများ၊နိုင်ငံတကာသတင်းများနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါသည်။
(ဖတ်ရင်းလှူ) Doctor Strange2နဲ့ ၄င်းရဲ့စပရိုက်များအကြောင်း
January 24, 2022 Heroes for Myanmar 0
Multiverse တခွင်က ဇာတ်ကောင်များအပြင် မထင်မှတ်ထားမယ့်စပရိုက်တွေများစွာပါဝင်လာမယ့် Doctor Strange in the Multiverse of Madness ရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး Rumor သတင်းတွေအကြောင်းရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ယခုအကြောင်းအရာတွေဟာမှန်ကန်နိုင်တာကြောင့် Spoiler ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြိုတင်သတိပေးပါရစေ။ ဒီအကြောင်းကိုဆက်မဖတ်ခင် (ဖတ်ရင်းလှူ) Doctor Strange2မှာပါဝင်လာနိုင်မယ့် ဇာတ်ကောင်များပေါင်းချုပ် ကိုအရင်ဝင်ဖတ်ထားပေးပါဗျာ။ […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Doctor Strange2မှာပါဝင်လာနိုင်မယ့် ဇာတ်ကောင်များပေါင်းချုပ်
Fan Service ကောင်းကောင်းပေးတတ်တဲ့ Marvelကတော့ NoWayHome အပြီးမှာနောက်ထပ် ပြောင်မြောက်မယ့် လုပ်ရပ်မျိုးထပ်ဖန်တီးလာဦးမလဲ? MCU ရဲ့ Spider-Man3မှာ Spider-Man ၃ယောက်ပါလာမယ်လို့ ရုပ်ရှင်မထွက်ခင်ထိမယုံခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့ဆို ၄င်းရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုသံတွေတိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာကြာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင် ၄င်းတို့ရဲ့Spider-Man ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အဆုံးသတ်လှလှတစ်ယောက်မှမရခဲ့တဲ့ Tobey Maguire နဲ့ […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) နဂါးမေမေရဲ့ Marvel ဇာတ်ကောင်
Marvel Studios ရဲ့နောက်လာမယ့် Disney+ series တွေထဲကမှ အမျှော်လင့်ရဆုံးဖြစ်တဲ့ “Secret Invasion” အတွက်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းစဥ်တွေ စတင်နေပြီးဖြစ်ကာ ရိုက်ကွင်းပေါ်မှ ပုံရိပ်အချို့လည်း ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေဘက်ကနေ “Secret Invasion” ကို အထူးတလည်မျှော်လင့်စောင့်စားနေရခြင်းမှာ နာမည်ကြီးမင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Emilia Clarke ကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ “Game of […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Fantastic Four အတွက် သရုပ်ဆောင်ရွေးနေပြီ။
2023 နှစ်ကုန်လောက် ဒါမှမဟုတ် 2024 ခုနှစ်အတွင်းမြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ MCU ရဲ့ Fantastic Four ရုပ်ရှင်အတွက် သရုပ်ဆောင်မယ့် မင်းသမီး၊ မင်းသားတွေကိုရွေးချယ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကို Spider-Man ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ ဒါရိုက်တာ Jon Watt ကရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီး ဒါက Marvel ရဲ့ တတိယမြောက် Fantastic […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Secret Invasion ရိုက်ကွင်းမှာတွေ့ရတဲ့ Nick Fury, Maria Hill နဲ့ တခြားသောသရုပ်ဆောင်များ
ရိုက်ကူးရေးပြီးဆုံးခါနီးပြီဖြစ်တဲ့ Secret Invasion ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်ကပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပါတယ်။ အင်္ဂလန်က Halifax မြို့နဲ့ Leeds မြို့တိူ့မှာရိုက်ကူးနေကြတာဖြစ်ပြီး GOTရဲ့နဂါးမေမေ Emilia Clarke နဲ့ အော်စကာဆုရှင်မင်းသမီး Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott စတဲ့သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေလည်းပါဝင်ထားပါတယ်။ Secret Invasion ဆိုတာ […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) နောက်ဆုတ်သွားပြန်တဲ့ Mission Impossible7နဲ့ 8
January 23, 2022 Heroes for Myanmar 0
ရုံတင်ရက်တွေ ခဏခဏပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခံရတဲ့ မင်းသားကြီး Tom Cruise ရဲ့ Mission Impossible7မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ထွက်ရှိလာဖို့ သတ်မှတ်ခံရသော်လည်း ရုံတင်ရက် နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ပြောင်းလဲခံရပြီး နောက်နှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့မှာသာ ကြည့်ရူလို့ရတော့မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ Mission Impossible […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Johnny Depp ပြန်လာပြီ!
“ဇနီးဖြစ်သူကို နှိပ်စက်သူ” ရယ်လို့ မကောင်းသတင်းတွေ ထွက်အပြီး ဟောလီးဝုတစ်ခုလုံးက ဝိုင်းဝန်းဖယ်ကျဉ် ခံထားရတဲ့ မင်းသားကြီး Johnny Depp ကတော့ ရိုက်ကွင်းတွေဆီကို တဖန်ပြန်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်ဘုရင်ကြီး Louis XV အဖြစ် Johnny Depp ဟာ ပြင်သစ်မင်းသမီး Maiwenn ရဲ့ […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Ben Affleck ရော Henry Cavill ရော MarvelStudios နဲ့ဆွေးနွေးနေကြောင်းသိရ
DCEU ရဲ့ Batman နဲ့ Superman သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Ben Affleck နဲ့ Henry Cavill တို့ဟာ MCU မှာပါဝင်လာဖို့ MarvelStudios နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့လို့ Rumor တွေထွက်ရှိလာပါတယ်။ Rumor ဆိုပေမယ့်လည်း ဒီသတင်းကို အရင်က leak တွေဖြန့်နေကျ၊ ထွက်လာနေကျ […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) NoWayHome နဲ့ Hawkeye ကြောင့် ကြည့်ရှုသူပိုများလာတဲ့ Daredevil Series
January 22, 2022 Heroes for Myanmar 0
Marvel ရဲ့အကောင်းဆုံးစီးရီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Daredevil စီးရီးဟာဆိုရင် Nielsen ရဲ့ကြည့်ရှုသူထိပ်တန်း စာရင်း 10 ထဲကိုတစ်ဖန်ပြန်ရောက်လျက်နေပါတယ်။ Top 10 စာရင်းအပြည့်အစုံမှာ 1. The Witcher (Netflix) – 16 episodes, 2.7B minutes of viewing 2. Emily […]
(ဖတ်ရင်းလှူ) Yesterday ရုပ်ရှင်မှာ Ana de Armas မပါလို့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုတရားစွဲနေကြ
2019 တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ musical ရုပ်ရှင် Yesterday ကို တော်တော်များများကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီရုပ်ရှင်မှာ Blade Runner 2049, Knives Out, No Time to Die ရုပ်ရှင်တို့နဲ့သိကြမယ့် မင်းသမီးAna de Armas ပါဝင်ထားပေမယ့် တကယ်ရုပ်ရှင်ရုံတင်တော့မပါဝင်လာခဲ့ပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ရဲ့ Trailer […]